ROM maka gam akporo, hazie ma nweta ọtụtụ ihe na ekwentị gị | Gam akporosis
Mgbe ụfọdụ enwere ụfọdụ okwu mgbagwoju anya dịka ROM ma ọ bụ ihe bụ otu ihe ahụ English acronym of nchekwa - naanị nchekwa, ma ọ bụ icheta naanị ihe nchekwa. A na-akpọkarị ha ROM na mgbanwe emere na sistemụ arụmọrụ gam akporo n'onwe ya site na ndị ọrụ nwere ihe ọmụma mmemme nke bu n'obi ịkwalite ma ọ bụ hazie sistemụ arụmọrụ a. Na ROM Kasị ama ebe ọ bụ na mmalite nke gam akporo na-niile variants nke CyanogenMOD, nke mere otutu ndi ROM maka otutu ihe di iche iche gam akporo.
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhazi gam akporo gị nke ọma, chọpụta ihe kacha mma ROM maka gam akporo ị nwere ike itinye na ekwentị ma ọ bụ mbadamba iji nweta ọtụtụ ihe na ya ma ọ bụ hazie akụkụ niile nke usoro Google.
Ndị kacha mma ROM maka gam akporo
N'okpuru ị ga-ahụ nhọrọ nke ROM kacha mma dị ugbu a maka ngwaọrụ gị.
Ọdịnihu nke "ikpuchi" ma ọ bụ ịwụnye ROM ga-agafe site na ime ya site na ihe nchọgharị weebụ
por Manuel Ramirez eme Ọnwa 10 .
Kedu oge ndị ahụ mgbe ịwụnye ROM dị mkpa iji nwee ekwentị kwụ ọtọ n'enweghị nsogbu ...
Otu esi abanye na mgbake na gam akporo 11 na Samsung Galaxy
por Manuel Ramirez eme Ọnwa 11 .
Wụnye UI 3.0 arụnyere na Galaxy Note10 +, ugbu a enwere ihe ọhụụ na nke a iji tinye mgbake na gam akporo ...
LineageOS 17.1 na-eweta gam akporo 10 na Nexus 7 na Moto Z3 Play
por Onyeka Onwenu eme Ọnwa 11 .
Otu n'ime ROM ndị kachasị ewu ewu bụ LineageOS, n'ihi ya ọ ga-ekwe omume inye ndụ ekwentị na mbadamba ...
Vivo ga ewebata Funtouch OS 9.1 na Septemba 17
por Eder Ferreño eme 2 afọ .
Vivo ga-ahapụ anyị ọtụtụ ekwentị nwere mmasị na izu ndị a, dịka NEX 3 na NEX 3 ...
Xiaomi na-akwụsị ịhapụ MIUI 10 betas n'ọnwa a
Xiaomi na-akwadebe ịmalite MIUI 11 n'oge na-adịghị anya, a na-atụ anya na ọ ga-abata na September dị ka ozi ọhụrụ….
MIUI 11 ga-abịa na September na akụkọ dị iche iche
Na mbido afọ, Xiaomi n'onwe ya gosipụtara na ha na-arụ ọrụ na MIUI 11. Nke a bụ ihe ọhụrụ ...
Izu ole na ole gara aga, a kwadoro na Huawei na-ahazi ọgbakọ mmepe na mbido August. N'otu,…
MIUI ga - enwe obere mgbasa ozi dịka Xiaomi kwuru
Dị ka anyị kwurula, MIUI nwere mgbasa ozi na interface ya, ọ bụ ezie na ọ bụ ihe mepụtara nsogbu dịka ọnwa ole na ole gara aga….
Ndị a bụ ụfọdụ mgbanwe anyị ga-ahụ na EMUI 10
N'ime otu izu EMUI 10 ga-eze n'ihu, dị ka enen a izu ole na ole gara aga. Nke a…
Kwadoro ụfọdụ atụmatụ ọhụrụ nke EMUI 10
Abọchị ole na ole gara aga ka ekpughere ụbọchị ngosi nke EMUI 10, ụdị ọhụụ nke ...
EMUI 10 enweela ụbọchị ịgba akwụkwọ
Izu ndị a EMUI mbipute 9.1 amalitelarị, nke na-eru ọtụtụ ekwentị Huawei. Ọ bụ ezie…
Olee otú imelite Rom na-enweghị data ọnwụ ma ọ bụ arụnyere ngwa
Etu ị ga-esi melite LG G3 na gam akporo 7.1.2 (ihe atụ mba ụwa D855)
Otu esi emelite LG G3 na gam akporo 7.1.1 (ihe atụ D855)
Otu esi melite LG G2 na gam akporo 7.1.1. (Nlereanya D802)
Etu esi melite Samsung Galaxy S3 na gam akporo 7.1 version GT-I9300
Etu esi melite Samsung Galaxy S3 na gam akporo 6.0 Marshmallow
(Post emelitere) Otu esi emelite Samsung Galaxy S2 na gam akporo 5.1.1 Lollipop
Kemmasi !! Etu esi melite Samsung Galaxy Tab 7 ka Android 5.1.1 Lollipop (P1000 model)
Etu esi melite Samsung galaxy S3 na gam akporo 5.1.1
Etu esi melite Samsung Galaxy Tab 7, ihe nlele P1000 na gam akporo 4.4.4
Mafere Samsung! ma melite mini Galaxy S3 mini gam akporo 4.4.3
Ngwọta nke njehie site na Iweghachite mgbe ị na-achọ ịgbanye gam akporo 4.4 Kit Kat Rom
Download official Android 4.3 maka Samsung Galaxy S3 (na-enweghị KNOX)
Esi edozi nsogbu oghere na LG L3 E400
Flash a ngwaahịa ROM na gị Xperia na Flashtool
Idozi oyiri tracks nke na Roms jelii agwa ma ọ bụ ICS